Poseidon Jewelery - Imewe Mmewe
Jewelery Jewelery I cheputara n’egosiputa mmetụta m. Ọ na-anọchite anya m dị ka onye na-ese ihe, na-ese ihe nakwa na ọ bụ mmadụ. Edebere ihe ga - eme Poseidon n'oge awa kachasị njọ nke ndụ m mgbe ụjọ jidere m, enweghị nsogbu yana nchebe. Ihe mere m ji chepụta mkpokọta ndị a bụ iji chekwaa onwe gị. N’agbanyeghi na echiche a agbariala n’oru a, o dikwa otua. Poseidon (chi nke oké osimiri na "Earth-Shaker," nke ala ọma jijiji na akụkọ ifo ndị Gris) bụ nchịkọta ọrụ mbụ m ma na-elekwasị anya na ụmụ nwanyị siri ike, nke a pụtara inye onye na-anụ ya mmetụta nke ike na ntụkwasị obi.
Aha oru ngo : Poseidon, Aha ndị na-emepụta ya : Samira Mazloom, Aha onye ahịa : samirajewellery.
Jewelery Samira Mazloom Poseidon